Indlu yasemaphandleni eyonwabileyo, enendawo yomlilo.
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguRoxanne
Phumla kunye nosapho lonke kule ndawo yoxolo yokuhlala. Indawo yelali enendawo entle kwaye uhamba emaphandleni. Ii-pubs ezikufuphi, iivenkile zokutyela, iifama / iivenkile zasefama kunye nohambo olufutshane lwemizuzu emi-5 ukuya kwivenkile yokutya yasekhaya. Zininzi izinto ekufuneka zenziwe ekuhlaleni kusapho lonke.
I-cottage ihlaziywe kuyo yonke indawo kwaye ineempembelelo ezininzi zasekhaya. Indawo yegadi yabucala, i-driveway ukuze ilingane iimoto ezi-2 kunye nendawo yokupaka yabucala eyongezelelweyo ngasemva kwepropathi.
I-cottage eyodwa eneempawu zokuqala ezibekwe kwindawo entle yaseCromer. Indawo yegadi yabucala ebiyelweyo. Indlela yabucala. Ikhitshi enkulu kunye nendawo yokutyela.
Igumbi lokulala eliphindwe kabini libekwe kumgangatho ophantsi we-cottage kufutshane nendlu yangasese kunye negumbi lokuhlambela. Igumbi lokuhlala, ikhitshi / isidlo sangokuhlwa kunye negumbi loncedo nazo zikumgangatho ophantsi.
Igumbi lokulala lenkosi kunye namagumbi amabini angatshatanga akumgangatho wokuqala kunye negumbi lokuhlambela eliphambili.
Zonke izixhobo zokupheka kunye nezokutyela zinikezelwe.
Nasiphi na isixhobo esifunekayo kubantwana beenwele eziphakamileyo/ibhedi yokuhamba njalo njalo siyafumaneka. Nceda ucele nantoni na ocinga ukuba ungayidinga.
Ukuhamba okufutshane ukuya kwiilali ezingabamelwane iArdeley kunye neWalkern. Indawo ephawulwayo yendawo iCromer windmill (imizuzu emi-2 yokuqhuba) kunye Khetha eyakho intsimi yoojongilanga kunye nevenkile yehashe yekofu (ixesha lonyaka kuphela)
Ukuqhuba ngemizuzu eli-15 ukuya eStevenage, eKnebworth house- adventure park, indlu kunye negadi.
Amasimi e-Hitchin lavender (imizuzu engama-20 ukuqhuba)
Isikhululo sikaloliwe saseStevenage esinekhonkco elithe ngqo eLondon. Ukuhamba ukuya eLondon ookumkani bawela kwimizuzu engama-25!
I-Cromer yindawo enoxolo, enefama zasekhaya kunye nomhlaba weefama. Indawo entle yokuhambahamba kunye nee-pubs zelizwe ezipholileyo kodwa ingeyiyo i-drive ekude ukuya kwiidolophu ezixakekileyo ze-stevenage kunye ne-Hitchin eninzi yokwenza izibini okanye usapho luphela.
Ndikwahlala apha elalini nosapho lwam (umyeni nabantwana abayi 3) so ndikufutshane xa kukho into oyidingayo okanye unemibuzo ndicela ubuza.
Ndihlala ndikuvuyela ukunceda. Nathi sinayo yonke into eniya kuyidinga ngabantwana, ukuba kukho into oyilibalayo kuhambo lwakho undazise kwaye ndingavuya ukuba ndikwenzele yona.
Ndihlala ndikuvuyela ukunceda. Nath…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cromer